FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA : Mandeha ny resaka fa Rafidimanana Narson no kandidàn’ny HVM
Miha manakaiky ny taona 2018. Taona izay hanatanterahana ny fifidianana Filoham-pirenena. 15 juin 2017
Na dia eo ny fangatahan’ny mpikambana ao amin’ny HVM (Hery vaovao ho an’iy Madagasikara) ny filatsahan’ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina ho kandida indray amin’ny taona ho avy, araka ny loharanom-baovao voaray tamin’ny tomponandraikitra maromaro akaiky ny fitondrana, dia voalaza fa mety tsy hilatsaka ho Filoha intsony izy.
Hitady kandidà hisolo toerana azy izay hotohanan’ny Hvm amin’ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny taona ho avy araka izany ny Filoha am-perinasa. Ny minisitry ny Tetikasan’ny Filoha sy ny fanajariana ny tany, Rafidimanana Narson no voalazan’ireo tompon’andraikitra ireo ho niantefan’ny safidin’i Hery Rajaonarimampianina, ka mety ity voalohany araka izany no handray anjara amin’ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny taona 2018 hisolo ny kravaty manga.
Araka ny loharanom-baovao dia noteren’ny Firenena sasany ao amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena Rajaonarimampianina satria tsikaritr’ ireto voalohany fa tsy ho lany velively ity farany ary mety hitarika korontana eto amin’ny Firenena ny filatsahany.
Fandrebirebena sain’olona fotsiny
Efa mandeha tokoa ny feo fa mety tsy hilatsan-kofidiana i Hery Rajaonarimampianina amin’ny taona 2018 fa vitsy ny olona hino an’izany. « Fandrebirebena sain’olona fotsiny izany rehetra izany ary entina hamitahana ny mpanohitra. Tsy azo atao an’eritreritra ny tsy filatsahan- kofidian’i Hery Rajaonarimampianina, ka hanohana ny minisitry Rafidimanana Narson », hoy ny fanazavana nataon’ny mpandraharaha tafaresaka taminay. « Antony iray voalohany dia matahotra ho voafitaky ny minisitry Rafidimanana Narson raha toa ka lany ity farany tahaka ny namitahany an’ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha Andry Rajoelina, izay nahatonga azy amin’ny toerana misy azy ankehitriny.
Na dia izay fotsiny dia ampy ka aza manantena ny tsy filatsahan’i Hery Rajaonarimampianina amin’ny 2018 na dia fantany aza fa mety tsy ho lany izy », hoy hatranyity farany.
Manomboka miparitaka ny HVM
Na dia eo ny fanaovana kaongresim-paritra etsy sy eroa dia maro ireo mpiara-dia amin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina manomboka misintaka moramora an’ity farany sy ny antoko najorony.
Tsy vitsy ireo olom-boafidy HVM tafaresaka taminay nilaza fa tsy hanohana azy intsony amin’ny 2018 satria tsy mahay mankasitraka ny soa natao azy, hoy izy ireo. Ao ihany koa ireo mpandraharaha nanohana azy nefa nivadihany tampoka. Tsy resahina intsony ny fomba fitantanany ny Firenena ankehitriny.
2017-06-16 08:37:15 par JF
Efa hitanay zany ry akama a !
HVM sy ny tariny efa nampihinana ny tsy fihinana anay izany ry kaky ô !
Délestage, efa hitanay koa zany ry nama a !
Fahantrana efa niditra ny tranonay tokoa ry neny a !
Tsy fanajana vahoaka, efaniainanay izany ry se a !
Fandikan-dalana sy lalam-panorenana efa fiainanay izany hatramin’izay ry koto a !
Fanodinkodinana "subventions exceptionnelles" efa zary kilalaonay izany ry voahangy a !
Ka na i Rajao io na ireo tariny dia efa gisa mainty ka aleo izahay vahoaka no hitsara azy ireo amin’ny 2018.
Elaniainako tamin’ity firenena ity fa tsy mbola nahita korontana sy fahantrana tahak’izao aho. VITAAAAAAAAAAA !